Ufakela isitolokazi umlimi wesifazane osemncane
UNKSZ Mbali Bengu ongumnikazi weK’saselihle Vegetables eseMfulamuhle eMzimkhulu, ephethe omunye wemikhiqizo yakhe iklabishi. Isithombe: Sithunyelwe
Phili Mjoli | March 4, 2021
ISIBINDI nokukholelwa ekutheni lokhu akufisayo kuzokwenzeka, yikho okumnike amandla okuthi athathe isinqumo ngempilo yakhe, umlimi wesifazane osemncane.
UNksz Mbali Bengu waseMfulamuhle eMzimkhulu, osalinde ukuthweswa iziqu zeBachelor of Education eDurban University of Technology, uthi akanayo ingcindezi yokufuna umsebenzi njengoba esanda kuqeda ukufunda, kunalokho lesi sikhathi usisebenzisela ukukhulisa ibhizinisi lakhe lokulima.
Le ntokazi eqede iziqu zayo nyakenye, ingumnikazi weK' saselihle Fresh Vegetables, etshala iphinde idayise imifino nezinye izitshalo kule ndawo. Eminye imikhiqizo yakhe uyidayisela uSuperSpar oseMzimkhulu. Utshala emhlabeni oyihektha elilodwa nohhafu, kanti ngenyanga edlule ukhiqize amasaka e-butternut angu-50 (7kg), amaklabishi angu-400 namasaka amazambane angu-45 (10kg).
UNksz Bengu uthe akesabi ukulandela lokho asuke ekholwa ukuthi kuzomphumelelisa.
"Ngaphambi kokuthi ngifundele ubuthisha ngangisebenza ngipakisha impahla ezitolo. Ngayeka ngabuyela esikoleni ngayoqala kuGrade-11 ngoba nganginemiphumela ethile, engangifuna ukuthi ingingenise enyuvesi. Ngesikhathi ngikwenza lokho ngangiphokophelele ekutheni ngizoba wuthisha ngingazi ukuthi ngizothi ngisenyuvesi, ngithole ithuba lokufunda ngebhizinisi okungenze ngaba ngumlimi. Baningi ababengikhuza ngokushiya umsebenzi bethi asikho isiqiniseko sokuthi ngizophasa ngale ndlela engiyifunayo. Ngaphikelela ngoba ngazi ukuthi ngifuna ukuba wuthisha," kusho uNksz Bhengu.
Uqhube wathi waqala ukuthanda ukulima ngesikhathi ebamba itoho epulazini langakubo, kodwa wazitshela ukuthi akuwona umkhakha angangena kuwo ngoba ecabanga ukuthi kudingeka imali eningi ukuze abe nezinsiza ezibizayo zokusebenza.
"Ngaleso sikhathi sasiholelwa ngebhakede likatamatisi njalo ngosuku. Kwakuba kuwe ukuthi uyawudayisa noma uyawudla. Ngabuka ukuthi lo mlimi kusho ukuthi ukhiqiza into eningi njengoba ekwazi ukuthi aholele abantu abaningi kangaka, ngamabhakede katamatisi njalo ngosuku. Ngabona ukuthi kusho ukuthi uyayenza inzuzo ngomkhiqizo wakhe ngoba ukwazi ukukhipha into eningi kangaka aholele ngayo abantu. Kule minyaka bengilokhu ngibona ukuthi la mapulazi asalokhu eqhubeka nokukhiqiza ngoba ukudla kuyadingeka ezweni," kulandisa umlimi.
Uthe uqale ukulima ngo-2019 ngemuva kokuthola ukwelulekwa ngaphansi kophiko lwaseDUT (Ndumiso), iMidlands Entrepreneurship Centre and Students Desk. Uthe lolu phiko lwamhlomisa ngolwazi lwebhizinisi wathola noxhaso lwemali wase eqala ibhizinisi lakhe ngo-2019.
"Umkhiqizo wami ngithi ngiwutshala ngibe ngazi ukuthi uzothengwa ngubani. Lokho kwenza ukuthi ngingazitholi senginenkinga yokuthi angazi ukuthi umkhiqizo wami ngizowudayisela bani usulungile," kusho uNksz Bhengu.
Uthe ngolunye ulwazi lokulima usizwa ngabalimi bangakubo njengoba esemusha kule ndima.
Waqala ngoR1 200 osenenkampani ekhiqiza izinto zokuhlanza